Fizarana ny Fananana in Connecticut - fisaraham-Panambadiana rosiana Mpisolovava - Rosiana rehetra ireo Mpisolovava eto! Ny lehibe indrindra ara-dalàna ny vavahadin-tserasera.
Fizarana ny Fananana in Connecticut - fisaraham-Panambadiana rosiana Mpisolovava
Raha tsorina,"misaraka fananana"an'ny iray monja vady
Toy ny ankamaroan'ny states, anisan'izany ny tany amin'ny afovoany andrefan'i etazonia sy ny firenena rehetra miorina eny amin'ny faritra Atsinanan'i seaboard, Connecticut"- drariny ny fizarana"- panjakanaVao sivy firenena - ny ankamaroany dia hita any Atsimo andrefana ny fizarana ny firenena hanaraka ny fiaraha-monina fananana fitsipika. Alaska efa nandray ny tsy an-katerena ny fiaraha-monina ny fananana rafitra izay mamela ny mpivady mba hiditra an-tsoratra fifanarahana designating ny sasany na ny fananana rehetra araka ny fiaraha-monina fananana. Izany lahatsoratra mandinika ny fomba Connecticut fitsarana zarao ny fananana ao amin'ny fisaraham-panambadiana sy ny fomba Connecticut ny fitsipika ho an'ny fananana fizarana samy hafa avy ao amin'ny firenena hafa.
Ao ny milaza fa manaraka ny"drariny ny fizarana"fomba fizarana fananana, ny fananana dia zara raha nisara.
Ny marimarina kokoa, ny fitsarana hampisaraka ny mpivady ny fanambadiana fananana somary, raha tsy mandrakariva voatery ho izany koa, mampiasa ny fanasan-damba ny lisitry ny lafin-javatra mba hahafantarana ny fomba fananana tokony ho nahazo. Ny sasany amin'ireo zavatra fitsarana diniho ahitana ny halavan'ny ny fanambadiana, raha ny divorcing mpivady manana ny zanaka, ny mpivady' ny fidiram-bola, ny fitadiavam-bola mety ho araka ny fanambadiana dia efa tapitra, ary raha vady iray nijanona an-trano mba hitaizana ny ankizy.
Connecticut ny dikan-drariny ny fitsinjarana toa be hafa avy amin'ny firenena hafa izay manaraka ny drariny ny fitsinjarana fitsipika ny fananana ny fisarahana.
Fianakaviana lalàna ny fitsarana tao an 'ny lalàm-Panorenana ny Fanjakana' no malalaka ny fahefana loka mpivady fananana na ny lafiny eo ny fisaraham-panambadiana, na inona na inona ny fomba dia mitondra ny lohateny hoe, rehefa izany dia azony, na dia noraisiny ho toy ny fanomezana na ny lovany. In Connecticut, fananana rehetra dia fananana ara-panambadiana, izay maranitra mifanohitra amin'ny lalàna ao amin'ny firenena mpifanolo-bodirindrina. Io fahasamihafana io no mahatonga Connecticut"rehetra-ny fananana ny"fanjakana, izay midika fa ny zava-drehetra ny mpivady manana ara-drariny ny lalao rehefa mizara ny zavatra ao fisaraham-panambadiana. Maro drariny ny fitsinjarana ny firenena, ny fomba fananana ny lohateny hoe mitana anjara toerana eo amin'ny fomba izany no nozaraina ao amin'ny fisaraham-panambadiana. Satria drariny ny fitsinjarana dia mifototra amin'ny hevitra hoe fananana tokony ho zaraina toy ny somary araka izay azo atao, ny sasany ny fitsarana dia tafiditra ao ny fomba manokana ampahany ny fananana dia mitondra ny lohateny hoe. Raha ny zavatra hita ao dia ny iray fotsiny vady ny anarana, ny fitsarana ao amin'ny firenena sasany, dia mora kokoa ny loka izany ny titleholder vady. Ny anaram-boninahitra tsy milalao anjara amin'ny Connecticut, na izany aza, ary ny fitsarana dia toy ny mety ho mari-pankasitrahana mari-tsy titleholder vadinao toy ny vady izay manana an-pananana fotsiny ao ny anarany. Connecticut ihany koa mahatonga ny tsy misy fanavahana ny eo amin'ny fananana ny mpivady alohan'ny tompony izy ireo no nanambady ary ny zavatra izy ireo nividy araka ny fanambadiana. Izany no samy hafa amin'ny lalàna ao amin'ny ankamaroan'ny firenena, izay fananan'ny vady talohan'ny fanambadiana dia matetika heverina ho azo antoka avy amin'ny fisarahana eo ny fisaraham-panambadiana. Fanomezam-pahasoavana sy ny lova ihany koa ny atleta, izay lasa avy amin'ny fitsipika ao amin'ny ankamaroan'ny firenena. Ao amin'ny ankamaroan'ny firenena, ny manavaka ny fananana dia ahitana zavatra toy ny fanomezam-pahasoavana, lova, fananan'ny tompony alohan'ny fanambadiana, sy ny fananany foana tanteraka mitokana avy ny mpivady ny mpiray fananany. Fampifangaroana ny manavaka ny fananana miaraka amin'ny mpiray fananana dia antsoina hoe"commingling"sy afaka manafoana na mampihena ny manavaka ny fananana ny filazana. Connecticut no tsy manaiky ny manavaka ny fananana, na ny fianakaviany ny lalàna fitsarana ao anatin'ny ny fanjakana dia miezaka miverina amin'ny antoko iray ihany-toerana izy ireo alohan'ny nivady izy ireo - indrindra fa ao amin'ny fanambadiana ny tena fohy faharetan'ny. Ao amin'ny ankamaroan'ny firenena,"- panambadiana ny fananana"dia na inona na inona azony nandritra ny fanambadiana, na inona na inona ny fomba dia mitondra ny lohateny hoe na iza nahazo azy. Toy ny manavaka ny fananana, Connecticut ihany koa dia tsy mankasitraka ny fananana ara-panambadiana. Ny marimarina kokoa, ny zavatra rehetra ny mpivady dia manana fananana foto-kevitra ny fisarahana. Na dia Connecticut lalàna mahatonga tsy misy fanavahana ny manavaka ny fananana sy ny fananana ara-panambadiana, ny fifandraisana ao an-toerana ny fitsarana no namoaka didy fa ny vola natao fotsiny ho vady iray eo ambanin'ny toe-javatra sasany. Ohatra, tao amin'ny tranga izay ny roa nividy an-trano miaraka amin'ny mpiray vola sy ny vadiny mbola manao ny fanatsarana ny fananana ny manokana vola araka ny fisarahana, ny fitsarana dia milaza fa ny lanjan'ny fanatsarana araka ny fisarahana dia ny irery. Na dia eo aza ny fomba ny fisaraham-panambadiana dia aseho amin'ny fahitalavitra, somary vitsy ny toe-javatra farany eo amin'ny maharitra ny fitsarana ady. Ny ankamaroan'ny ny fisaraham-panambadiana dia nanorim-ponenana amin'ny sasany fifampiraharahana sy kely ny marimaritra iraisana. Ianao sy ny vadinao dia mety vonjeo ny tenanao fotoana be dia be sy ny vola amin'ny alalan'ny fandaminana araka izay azonao atao eo amin'ny manokana. Satria Connecticut dia rehetra-ny fananana ny fanjakana, na izany aza, ny fananana ny fizarana ny lalàna mety mitaky ny manam-pahaizana momba ny fanampiana. Antsoy za-draharaha ny fianakaviany ny lalàna mpampanoa lalàna ao an-toerana mba hanampy anao amin'ny famolavolana ny fifanarahana. Toy ny hafa-drariny ny fitsinjarana states, Connecticut fitsarana mijery lafin-javatra maro rehefa nampisaraka ny roa ny fananana. Rehefa mamaritra ny fomba zarao ny fananana, ny fitsarana dia diniho.
Lova - Trano sy ny Fiaraha-monina ny Amenities
Rusia: Kepemilikan Negara ing Ekonomi Ono